Tianjin Forman Furniture waa warshad horseed u ah waqooyiga Shiinaha oo la aasaasay sanadkii 1988 inta badanna bixisa kuraasta cuntada iyo miisaska. Forman wuxuu leeyahay koox weyn oo iibin wax ka badan 10 xirfadlayaal iibiyeyaal ah, oo isku daraya habka iibka ee khadka tooska ah iyo kan tooska ah, oo had iyo jeer muujinaya awooda asalka ah ee muujinta bandhig kasta, macaamiil aad u tiro badan ayaa u tixgeliya Forman inuu yahay lamaane joogto ah. Qeybinta suuqa waa 40% Yurub, 30% USA, 15% Koonfurta Ameerika, 10% Aasiya, 5% wadamada kale. FORMAN waxay leedahay in ka badan 30000 oo mitir murabac ah, waxay leedahay 16 nooc oo mashiinno cirbadeyn ah iyo 20 mashiinno feer ah, qalabka ugu horumarsan sida robot-ka alxanka iyo aaladda wax lagu duro ee duritaanka ayaa durba lagu dabaqay khadka wax soo saarka.
taas oo si weyn u wanaajisay saxnaanta caaryada iyo waxsoosaarka wax soo saarka. Nidaamka maareynta qaangaarka ah ee kormeerka tayada iyo sidoo kale shaqaale xirfad sare leh ayaa hubiya wax soo saar wax ku ool ah oo ah heerka gudbinta sare. Bakhaarka weyn wuxuu ka koobnaan karaa in ka badan 9000 mitir murabac oo kayd ah oo taageeraya warshadda ayaa si caadi ah u socon kara xilliga ugu sarreeya dhib la'aan. Qolka weyn ee carwada ayaa had iyo jeer kuu furmi doona adiga, isagoo sugaya imaatinkaaga!
Runtii mid walboo ka mid ah walxahaasi waa mid adiga xiiso kuu leh, fadlan nala soo socodsii. Waan ku farxi doonnaa inaan ku siinno xigasho markii la helo mid ka mid ah faahfaahinta faahfaahsan. Waxaan leenahay khabiirkeena gaarka ah ee R&D si aan ula kulanno mid ka mid ah requriements, Waxaan rajeyneynaa inaan helno su'aalahaaga dhowaan waxaan rajeyneynaa inaan fursad u helno inaan kula shaqeyno mustaqbalka. Ku soo dhowow inaad eegto ururkeenna.
Ahaanshaha xalka ugu sareeya ee warshadeena, taxanaheena xalka ayaa la tijaabiyey oo naga guuleystey shahaadooyin khibrad maamul. Xuduudaha dheeraadka ah iyo faahfaahinta liiska sheyga, fadlan dhagsii badhanka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.